UBrian Nichols - Umbulali weKhotho yaseAtlanta
Imvelaphi kunye noPhuhliso lweNkundla
Ngo-Matshi 11, 2005, uNichols wayetyala lokudlwengula kwi-Courtsuse yase-Fulton County e-Atlanta xa wayinqoba iphini lesifazane, wathatha isibhamu sakhe, wangena egumbini apho inkundla yayibanjelwe khona kwaye yadutshulwa ijaji kunye nentatheli yenkundla. UNichols uphinde wamangalelwa ngokubulala iphini likamphathiswa ozama ukuyeka ukuphuma kwindlu yamatyala kunye nokudubula i-agent federal ekhaya lakhe iikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwi-courtroom.
Ukuphunyuka kukaNichols kuye kwavela enye yezona zikhulu kunabantu baseGeorgia, eyaphela emva kokuba ithathe u-Ashley Smith umphathi wendlu yakhe kwaye wamqinisekisa ukuba amshiye aze abizwe nge-9-1-1.
UBrian Nichols Uphephe Ukugwetywa Kokufa
NgoDisemba 12, 2008
UBrian Nichols, umgwebi we-Atlanta Courthouse, ubalekele isigwebo sokufa xa igosa elithatha isigqibo sokufa kwakhe lavalwa emva kweentsuku ezine. Ijaji yahlula u-9-3 ngenxa yokunika uNichols isigwebo sokufa kunokuba aphile entolongweni.
I-Atlanta Courthouse Killer Ifunyaniswe Inetyala
NgoNovemba 7, 2008
Emva kokuxubusha ngeeyure eziyi-12, ijaji yafumana i-Atlanta Courthouse umbulali onetyala lokubulala kunye nezinye iindleko malunga nokufa kwakhe kwinqanaba lika-Fulton County Courthouse ngoMatshi 11, 2005. UBrian Nichols wathotywa enetyala kuzo zonke iindleko ezingama-54 emva kokuncenga unetyala ngenxa yesidima.
U-Ashley Smith Uyangqina ngokuchasene noBrian Nichols
Umfazi othe wathetha ummangalelwa ku-Atlanta Courthouse umbulali uBrian Nichols ekuzinikezele kwamapolisa ebonakalweni lakhe ukuba wayebhenela kwiinkolelo zakhe zonqulo ngelixa wayebanjwe eboyeni lakhe.
I-Atlanta Courthouse yokuThatyelwa kweTyala
Septemba 22, 2008
Emva kweminyaka yokulibaziseka kunye neeveki ezisi-9 ukukhetha ijaji labasetyhini abasibhozo kunye namadoda amane, ityala lokutyholwa kwe-Atlanta Courthouse shooter uBrian Nichols laqhubeka phantsi kokhuseleko oluphezulu ngoMvulo.
UNichols uye wathintela unetyala ngenxa yokubulawa kwejaji, intatheli yenkundla kunye nesekela likaSheriff kwi-Fulton County Courthouse kunye nommeli wenkonzo kamva ngaloo mini.
I-Atlanta Courthouse Uvavanyo loThutho lokugqibela luqala
Julayi 10, 2008
Ukukhethwa kweJuri ekugqibeleni kuqaliswe kwiKhotho yaseAtlanta Ukudubula ngosuku emva kokuba uBrian Nichols enqunywe ityala ngenxa yesidima sokubala kwama-54, kuquka ukubulawa kwabantu abane. Amangqina angaphezu kwama-600 acwangciselwe ukunikela ubungqina kwisilingo esiphezulu esingaphantsi kweenyanga.
Ukuhlolwa Kwengqondo Eyalungiselelwe uBrian Nichols
Ijaji iye yalawula ukuba abashushisi banokwenza iingcali zabo zengqondo zihlolisise uBrian Nichols, oceba ukubiza ukuba wayenamahloni xa edubula indlela yakhe ephuma kwi-Atlanta courthouse ngo-2005.
UNichols ufuna iJaji elitsha lisuswe
Aprili 23, 2008
Iqela lezokuvikela likaBrian Nichols lithi ijaji kufuneka ibuyele kwakhona ngenxa yokuba yayingumhlobo weli lixhoba.
UMgwebi ugcina iPhulo leJury kwiNkundla kaBrian Nichols
Epreli 11, 2008
Icala elitsha kwi-Atlanta Courthouse Shooting case liye lalawula ukuba inkqubo yokukhetha ijaji iya kuqalisa kwakhona ngoJulayi apho yayishiye ngaphambi kokuba iphazamise ukuphikisana nenkxaso-mali yokukhusela. UMgwebi weNkundla ePhakamileyo uJim Bodiford wakhipha isigwebo sokuba ukhetho lwamajaji lwaluza kuqhubeka ngoJulayi 10 ukusuka kwi-jury pool yangama-3 500.
I-Courthouse Shooting Judge ihamba phantsi
Ijaji eliphikisanayo kwi-Courts of Atlanta yokutshutshiswa kukaBrian Nichols uye wehla emva kwenkcazelo yamaphephancwadi ecaphunyayo ethi, "wonke umntu ehlabathini uyazi ukuba wakwenza."
I-County ukuya kwiNkxaso yeNgxowa-mali kaBrian Nichols
Icaleni lokugweba isigwebo sommangalelwa u-Atlanta umgwebi u-Brian Nichols unokuqalisa kwakhona ekuqaleni kuka-Matshi emva kokuba iKhomishana yesiGqeba saseFulton ivotele ukuchitha i-$ 125,000 ukuze incede ekukhuseleni ukuhlalutya ukuhlolwa kwengqondo.
Uvavanyo lukaBrian Nichols lokubethelwa luye lwaxilwa kwakhona
NgoNovemba 16, 2007
Kwesihlandlo sesihlanu, ityala lokubulala elityholwa yi-Atlanta Courthouse uKiller uBrian Nichols liye laphuza ngenxa yokungabi nalutho kwemali yokuzikhusela. Ukubambelela kwizibhamu zakhe naphezu kokugxeka okuqhubekayo, uMgwebi u-Hilton Fuller wagweba ukuba akayi kuqalisa ityala de kubekho imali enikezelwa kwiqela lezokuvikela likaNichols.
I-DA izama ukuQinisa ukuQala kweNichols Trial
NgoNovemba 2, 2007
Ummeli we-Fulton County wesithili uye wafaka isikhalazo kwiNkundla ePhakamileyo yaseGeorgia ngenzame ukunyanzelisa ijaji kwi-Atlanta Courthouse Shootings case ukuze iphinde ikhethise ukhetho lwamajaji.
I-Atlanta Courthouse yokuThatyelwa kweTyala lokuqalisa
Oktobha 15, 2007
Ukhuseleko luya kuba lukhuni kwi-courtyuse ye-Fulton County ngeli veki njengoko uvavanyo lukaBrian Nichols luqala kwisakhiwo esifanayo, osolwa ngokudubula indlela yakhe ephuma kwiminyaka emithathu edlulileyo.
Ukungabi Nemali Kungalimaza Uvavanyo lukaBrian Nichols
NgoFebruwari 12, 2007
Ityala likaBrian Nichols kwi-Atlanta kwimeko yecala lokutshutshisa linokulibaziseka ngenxa yokuba i-ejensi ejongene nokuhlawula iigqwetha zayo ezimiselweyo zenkundla ayikho imali.
Ikhotho yase-Atlanta iqala ukuhlaselwa
Nangona kungenakuqinisekiswa ukuba netyala lommangalelwa, ilingo elide, elikhutshweyo nelindleko lihlelwe ukuba liqalise kwikhondo elifanayo eliye lenzeke nokuba yimeko yoluphulo-mthetho.
U-Brian Nichols Ukulingwa kweNkundla ukulahlwa
NgoDisemba 22, 2006
UMgwebi weNkundla ePhakamileyo uHilton Fuller uye walasela esinye isikhalazo sokukhusela esiya kulibazisa ukuqala kwecala likaBrian Nichols.
I-Atlanta Courthouse yokuBuyelwa kweTyala lokuThuthukiswa?
Abagwebi bakaBrian Nichols baye bacela ukuba ityala lakhe lihanjiswe kwelinye inkundla, kuba le yangoku yimeko yecala.
Ukubamba u-Ashley Smith Gave Nichols Meth
U-Ashley Smith, ibhinqa elinamncedisa ukuthatha i-Atlanta Courthouse umbulali uBrian Nichols, ithi kwincwadi yakhe entsha ethi " Ingelosi engenakwenzeka " eyathetha naye ngokukholwa kwakhe yamnika i-methamphetamine ngethuba lokubanjwa kweeyure ezisixhenxe.
Uphuhliso oludlulileyo kwi-Atlanta Courthouse Icala lokubhenca:
Amabini aBanjelwe Ukubulala Umyeni ka-Ashley Smith
NgoJuni 23, 2005
Iminyaka emine emva kokuba uDaniel (Mack) Smith egwazwe efa ngo-Agasti, isakhiwo sezindlu saseGeorgia, isakhiwo sezindlu saseGeorgia, amadoda amabili asolwa ngokubethwa ukufa kwendoda ka-Ashley Smith, ibhinqa eliqinisekisa ukuba umbulali wase-Atlanta ujika Mapolisa.
Isigwebo sokuFunwa Sifuna iNichols
Meyi 5, 2005
Ummeli we-Fulton County wesithili uya kufuna isigwebo sokufa kwendoda esolwa ngokudubula indlela yokuphuma kwinqanaba le-Atlanta, lashiya abantu abane bafile kwaye beka i-manhunt enkulu kwimbali yaseGeorgia.
U-Ashley Smith Uqokelela iReward ye-70,000
Matshi 24, 2005
U-Ashley Smith wanikwa imali engama-R70 000 ngemali yomvuzo ekuncediseni abasemagunyeni ukuthungela isigxina somqhubi uBrian Nichols.
Ukuthinjwa: 'UThixo Wammisela Ngomnyango Wami'
Matshi 14, 2005
U-Ashley Smith, oneminyaka engama-26 ubudala, owamkela amapolisa ukuba i-Atlanta Courthouse Killer ifuna ukuziphendulela, wafunda kuBrian Nichols ethi "Injongo Eqhutywa Ngumdla," waxelela ukholo lwakhe, waza wathandaza kunye naye ngaphezu kweeyure ezisixhenxe kwiDuluth, eGeorgia yokuhlala.
I-Courtthouse Killer Waves 'White Flag' yoNyaka
Matshi 12, 2005
UBrian Nichols, indoda eyabulala abantu abathathu kwiSixeko soLwesihlanu seNkundla yaseFulton, yavusa ifulegi elimhlophe ukuzinikela kubaphathi emva kokuba bajikeleze indawo yokuhlala yaseMetro Atlanta eyayingowesifazane owayekwazi ukubiza 911.
I-Courthouse Killer inikeza iCops yeSlip
Matshi 11, 2005
Indoda yomntu waseAtlanta owabulala abantu abathathu kwi-Courteuse ye-Fulton County ngoLwesihlanu kusasa yaba nzima kakhulu xa isithuthi esicatshulwa ukuba sineziqhubi sasiqhutywe emva kweeyure ezili-14 emva kwepaki ephantsi yokupaka okufanayo apho kubiwe.
Iimbali ze-albhamu ezingu-9 ezithintekayo '(Yiyiphi Ibali) Uzuko lwasekuseni?'
Stegosaurs - I-Spiked, Plated Dinosaurs
Iprojekthi yokuBhala kweqela usebenzisa i-Google Docs
Geography yase Dubai